"जोगी जुत्त्या छाराका लागि" - ८० लाख आउँदा ८० करोडको रोईलो - Hamro Bulletin
धिरज कुँवर शनिबार २५, बैशाख २०७८ १४:१५
कुनै एक जमाना थियो गाउँमा एमाले र कांग्रेसको खाना, नाना र छाना चल्दैन थियो, तर यसबीचमा केही हदसम्म कम भएकै हो, फेरि अहिले त्यस्तै अवस्था आउन थालेकाे छ। सामाजिक सञ्जालमा गर्दा पर्टीका कार्यकर्ताकाे झगडा त्यही अवस्था आउन थालेको छ । कोरोनाबाट बच्न त हात धुनेछौं, सेनिटाइजर लाउँछौं, माक्स लगाउँछौं, खोप आएर काेराेना पनि जाला तर अन्धभक्त भाइरस भने मान्छेको दिमागबाट नहटेर त्यसले गर्ने असरबारे डरलाग्दो हुने अवस्था आएको छ ।
चुनाव जित्नु पूर्व नेताहरू सामान्य हुन्छ, तर ऊ चुनाव जितेर फर्किँदा अर्कै भइसक्छ। भोट दिएर जिताउने हामी जनता, घाममा लाइन लागेर फूलमाला लगाउन जाने हामि जनता, चुनावमा झडप हुँदा प्रहरीका लठ्ठी खाने हामी, आफ्नै मलामी जाने दाजुभाइको गाली गर्ने र खाने हामी, दुष्मनी गर्ने हामी, चुनाव जितेर गएको मान्छेले मन्त्री पद पाइहाल्यो भने त्यो नेता आउँदा सडकमा हिँड्न नपाउने पनि हामी। जो चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा हामीसँगै घुम्ने, हामीसँगै खाने गर्छ। जो हामीमाझ आफ्नो सुरक्षा महसुस गर्छ। आखिर चुनाव जितेर सांसद, मन्त्री हुनेबित्तिकै उसलाई किन सुरक्षा चाहिन्छ ? जुन जनताले मन्त्री बनाए उनैबाट नेतालाई कस्ताे कस्तो खतरा हुन्छ?' ति नेता हरुलाई ?
अर्को कुरा बजेटको, त्यो बजेट कुनै ब्यापारी, नेताको ढुकुटीकाे नभएर दिनरात मेहेनत मजदुरी गरेर राज्यलाई कर तिर्ने जनताको रगत पसिनाबाट आएको भन्ने कुरा किन बिर्सिन्छौँ हामी? हाम्रै करको बजेट हाम्रा लागि बिनियोजन गर्न पहल गर्ने ती को हुन ? हामीलाई कसैले निगाह दिएको, राहत दिएको नभएर त्यो बजेट हाम्रो अधिकार हो। राज्यले दिएको अधिकार पाउन जनताका लागि कसैले ठेकेदारी गरिरहनु हल पर्दैन । यदि जय जयकार नै गर्नुपर्ने हाे भने जननिर्वाचित पदाधिकारी र राजामा के फरक भयाे र? राजा खराब भने फाल्याैँ अब नेता फाल्नुपर्ने हाे जनताले?